Ikhaya » udliwano » Udliwanondlebe: Ngaphakathi kwengqondo ye-CEO yeFinnair
IGosa eliyiNtloko lesiGqeba saseFinnair, uTopi Manner, kusandul 'udliwanondlebe noMhlalutyi oyiNtloko wezeMali weCAPA - iZiko lezoPhapho, uJonathan Wober. Bachukumise uninzi lwezihloko zemixholo.
Etafileni bekukho imeko yangoku ngokubhekisele kwiFinnair, ngokubhekisele kubungakanani bayo kunye nokugcwala umzekelo.
Umphathi we-airline uxoxa ngefuthe le-COVID-19 kunye nezithintelo zokuhamba kunye neendlela ezinokubakho zokuqhubela phambili.
Okwangoku, iFinnair ijikeleze iipesenti ezili-12 zamanqanaba ezihlalo ze-2019, ke ukunyuka nokunyuka kuya kuthatha umsebenzi onzima kunye ne-finesse.
Funda olu dliwanondlebe olunzulu kunye nomphathi weFinnair u-Topi Manner, okanye uhlale phantsi umamele ikhonkco.
Siqala ngoJonathan Wober ka I-CAPA-Iziko loPhapho esamkela uTopi kwiNdibano kwingxoxo.
Kulungile, molweni ekuseni kwaye ndamkelekile kolunye uhlelo lweCAPA Live, kwaye ndonwabile ukwamkela ukuxoxa namhlanje ngeTozi Manner, iGosa eliyiNtloko lesiGqeba saseFinnair. Topi, wamkelekile kunye nombulelo ngokujoyina nathi.
Enkosi, Jonathan. Kulungile ukuba lapha.
Ndifuna ukuqala ngokubuza malunga nemeko yangoku ngokubhekisele kwiFinnair, umthamo, ukugcwala kwabantu, njlnjl. Usebenze kumanqanaba asezantsi kakhulu amandla. Kule veki ikhoyo, ngokweedatha ezivela kwi-OAG kunye neCAPA iphakamisa ukuba uku-12% yamanqanaba okuhlala e-2019 kwiveki yokuqala kaMeyi, okhoyo. iYurophu iyonke imalunga neepesenti ezingama-40, ke ngoko ungaphantsi komndilili waseYurophu. Ngaba kuyakhathaza kuwe kuba iFinland ibonakala ngathi iphantsi kakhulu kumazinga osulelo kwaye aphezulu kakhulu kumanqanaba okugonya, kodwa kutheni urhulumente wakho engakwazi ukufumana unxibelelwano ngakumbi, kwaye kutheni ungasebenzi kumanqanaba aphezulu?
Ndiyathetha, kunjalo. Kuyacaphukisa ukuba izithintelo zokuhamba zingqongqo eFinland, kwaye oko kuyayichaphazela imisebenzi yethu. Ukuza kuthi ga ngoku, sisebenza malunga neepesenti ezili-15 zamandla ethu kwaye oko kubandakanya neenqwelomoya ezinde zokuhamba ngeenqwelo moya zaseAsia esaziqala sele kudlule ihlobo. Ndiyathetha, ngoku sihamba ngenqwelomoya ukuya eTokyo, eSeoul, eShanghai, naseBangkok naseHong Kong. Kwaye ukuhanjiswa kwetrafikhi ende kuxhaswa kakhulu yimfuno yethu yemithwalo. Ngoku ngehlobo elizayo, ngeli hlobo, besikhupha into endinokuyibiza ukuba ndiqale ndikhuphe uthungelwano lwethu lwasehlotyeni, kwaye oko kubandakanya ukuba siceba ukubhabhela kwinto efana neendawo ezingama-60, ngakumbi i-European short haul iya kuba kwimenyu . Kwaye sijonge phambili ekwandiseni iinqwelomoya eziya eNyakatho Melika, ukunyusa ukuhamba eNew York kunye nokwazisa iChicago neLos Angeles.
Page 1 of 6 Edlulileyo Okulandelayo